Sifooyinka rootiyaha dheer leh iyo isticmaalka
waxaa maamula 18-08-14
Cuntada roodhida dheer waxaa lagu sameeyaa xumaynta waxyaabaha cagaarka ah ee aan sunta ahayn iyo waxyaabaha budada ah ee loo yaqaan 'polyurethane' bay'ad cimilada ku habboon. Ciyaaraha tartiib-tartiib-tartiib-tartiib ah waxay caan ku yihiin carruurta, dhallinta iyo xitaa dadka waaweyn ee ku nool Koonfur-bari Aasiya, sida Yurub, Ameerika iyo Japan, waxayna caan ku yihiin Yurub, Ameerika iyo Japan….
Habka nadiifinta rooti rooti ah
waxaa maamula 18-06-16
Haddii ay fududahay in la soo saaro bakteeriyada muddo dheer, waxay waxyeelo u leedahay caafimaadka, waana lagama maarmaan in la dhawro toy cufan squyy toy nadiif caafimaad ahaan. Habka loo nadiifiyo rooti jiiska lagu buufiyo: 1. Habka ugu fudud ee lagu nadiifiyo toy keeylaha leh waa inaad isku daydid inaad isticmaasho daawada ilkaha lagu nadiifiyo adigoon waxyeellada dusha sare ee t ...
Alaabta carruurtu ku ciyaaraan waa Qayb Caadi ah oo Carruurnimada ah
waxaa maamula 12-05-16
Waxay umuuqataa in guri caruur leh uu yahay guri ay ka buuxaan waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan. Waalidku waxay rabaan carruurtu inay yeeshaan farxad carruurnimo caafimaad leh. Alaabta carruurtu ku ciyaaraan ayaa qayb weyn ka ah koritaanka. Laakiin, dukaamada ay ka buuxaan waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan iyo ciyaaraha badankood waalid badan waxay bilaabaan inay isweydiiyaan kuwee caruusadahaani yihiin kuwa ku habboon iyo kuwa caruusadaha ku caawin doona carruurtooda ...
Maxay Macaamiisha Ugula eg Yihiin Dukaammadaha Hadiyadaha Khadka ah?
waxaa maamula 12-01-09
Ku habboon in la helo hadiyado 1.Dukaammada hadiyadaha hadiyado ayaa si cad u liis garaya qaybaha iyadoo loo eegayo heerar kaladuwan oo ay ka mid yihiin ， agab caan ah, cabbir, qaab, iwm. Hadiyadaha aad caan u ah ee aad ka heli laheyd dukaamada hadiyadaha khadka tooska ah waxaa ka mid ah shumacyada udgoon, gogosha qurxinta, caruusadaha xirxiran, qalabka elektiroonigga ah ...